Burning Suite မလိုပဲ window media player ပေါ်မှခွေ Burning နည်း | IT Sharing Network
Burning Suite မလိုပဲ window media player ပေါ်မှခွေ Burning နည်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Burning Suite မလိုပဲ window media player ပေါ်မှခွေ Burning နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပထမဆုံး window media player ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ညာဘက်ဒေါင့်က Burn files to discs ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Burn list (Drag items here) ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီက Drag items here ဆိုတဲ့ နေရာထဲကို ကူးချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို မောက်ကို နှိပ်ထားပြီး ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။
ကူးချင်တာလေးတွေ ထည့်လို့ပြီးသွားရင် အပေါ်ဆုံးနားက အောက်ကိုဆိုက်ထားထဲ မျှားလေးထဲက data cd or dvd ကိုရွေးပြီး drive ထဲကိုခွေထည့်ပြီး start burn ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သူ့ဘာသာကူးသွားပါလိမ့်မယ်။ ကူးပြီးလို့ သူ့အလိုလိုခွေထွက်လာစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ eject dist after burning ဆိုတဲ့ အမှတ်ကလေးကို ခြစ်ပေးထားပါ။
ဒီလောက်ဆို သူငယ်ချင်းအားလုံး အင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Burning software နည်းပညာ Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook